BEIJING - Abalawuli baseShayina bathathe izinyathelo ezintsha zokuqinisa ukulawulwa kwekhwalithi yokuthunyelwa kwempahla yezokwelapha emazweni angaphandle futhi baphinde balawule izinqubo eziphumayo ukuze kusize kangcono impi yomhlaba wonke yokulwa nesifo esinoveli i-coronavirus (COVID-19).
I-China izokwengeza ukuqondisa ekuthunyelweni kwamanye amazwe kwamamaski obuso abangahlinzeki, okudingeka ukuthi bahlangabezane nezindinganiso zekhwalithi zase-China noma izindawo ezithunyelwa kwamanye amazwe ngokulandelana kwazo kusukela ngeSonto, ngokusho kokukhululwa okuhlangene okuvela eMnyangweni Wezohwebo (MOC), iGeneral Administration. of Customs kanye Nokuphathwa Kwezwe Kwezokulawulwa Kwemakethe.
Abathumela ngaphandle imaski yobuso abangahlinzeki kufanele bafake isimemezelo esihlanganyelwe somthengisi kanye nongenisa impahla kwamanye amazwe lapho bedlula imvume yentela ukuze baqinisekise ukuthi basezingeni eliphezulu futhi ngeke basetshenziselwe izinjongo zokuhlinzwa, ngokusho kwenqubomgomo entsha.
I-kn95 iyimaski egunyazwe yi-GB2626-2006 yaseChina yokuvikela ukuphefumula komsebenzisi okujwayelekile kwesihlungi esilwa nezinhlayiyana zokuphefumula.Ilingana nezinga lokuvikela le-n95, kodwa ilandela kuphela izindinganiso zokuhlola zamazwe ahlukene.Ake sibheke ukusetshenziswa kwamaski we-kn95.
Ukusebenza kahle kokuhlunga kwamamaski ebanga le-kn95 ezinhlayiya ezinobubanzi be-aerodynamic ≥0.3µm kungaphezu kuka-95%.Ububanzi be-aerodynamic bamagciwane asemoyeni kanye nezinhlamvu zesikhunta ikakhulukazi ziyahlukahluka phakathi kuka-0.7-10µm, nakho okungaphakathi kwebanga lokuvikela.
Ngakho-ke, lolu hlobo lwemaski lungasetshenziselwa ukuvikela ukuphefumula kwento ethile ye-particle, njengokugaya, ukuhlanza nokucubungula uthuli olukhiqizwa amaminerali, ufulawa nezinye izinto ezithile.Ingxenye yegesi eyingozi eguquguqukayo.
Ingakwazi ukuhlunga kahle futhi ihlanze iphunga elingavamile elihogeliwe (ngaphandle kwamagesi anobuthi), isize ukunciphisa izinga lokuchayeka lezinhlayiya ezithile ezincane eziphefumulayo (ezifana nesikhunta, i-anthrax, isifo sofuba, njll.), kodwa ayikwazi ukuqeda ukutheleleka okuthintana naye, ukugula noma izingozi zokufa .